S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များတွင်အခန်းကဏ္ REC ထပ်တလဲလဲ LUCY LAWLESS LANDS ရာသီ2- တီဗီ
S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များတွင်အခန်းကဏ္ Rec ထပ်တလဲလဲ Lucy Lawless Lands ရာသီ 2
S.H.I.E.L.D. ၏အံ့'s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရာသီ2တွင် Lucy Lawless မှပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်စကားလုံးဖြင့် Geek Godliness ကိုထိုးနှက်နေသည်။
Starz ၏ sexy သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ပွားမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးစီးရီးနှစ်ခုလုံးတလျှောက်တွင်ပါဝါအထွto်အထိပ်သို့သူမ၏လမ်းကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီးနောက် Spartacus , geek နတ်ဘုရားမ Lucy Lawless လာမည့် ABC ရုပ်သံရဲ့လာမယ့်ဒုတိယရာသီအတွက်ထပ်တလဲလဲအခန်းကဏ္ with နှင့်အတူရုပ်ပြစာအုပ် aficionados မှသူ့ကိုယ်သူချစ်ခင်လိမ့်မည် S.H.I.E.L.D. ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ
မတရားမှုကိုယခင်ကချစ်ရာသခင်၏ကြယ်ပွင့် Xena: Warrior မင်းသမီးလေး , အမည်မသိဖြစ်စဉ်များအရေအတွက်နှင့်အမည်မသိစွမ်းရည်အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ခန့်မှန်းဂိမ်းစတင်ကြကုန်အံ့။ ငါတို့သည်အသေးစိတျအဘို့ငါတို့အသက်ရှုကိုင်ထားမရသင့်ပါတယ် - အံ့ vel ခြင်း Scoops သူတို့အားမျိုး (ညာ, အန်ဒီ Serkis?) အကြောင်းကိုအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ABC ရုပ်သံစီးရီး လုပ်တယ် ဒီတနင်္ဂနွေ, San Diego မှရုပ်ပြ -con မှာ panel ကိုရှိသည်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Lawless ရဲ့အခန်းကဏ္aboutကိုအကြောင်းကိုပေါ်ထွက်လာဖို့ဖြစ်လျှင်, ထိုမဆိုကဲ့သို့ကောင်းသောအချိန်ပုံရသည်။
မီးနှင့်ကစားသူမိန်းကလေး David Fincher
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ Lawless အထူးသဖြင့်ပြပွဲများအတွက်ဖန်တီးသူတစ် ဦး ဦး ကိုပုံဖော်၏, အသက်တာ၌တစ် ဦး ဂန္အံ့ character ခြင်းဇာတ်ကောင်ဆောင်ကြဉ်းကြည့်ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ မင်းသမီးသည်သူမကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျွမ်းကျင်မှု၊ လိမ္မာပါးနပ်သောဇာတ်ကောင်များကစားနိုင်သည့်အစွမ်းအစရှိသည်ဟုထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရွေးစရာများ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ SHIELD နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သူ Viper / Madame Hydra ၏အခန်းကဏ္onကို Lawless မှမြင်တွေ့ရခြင်းသည်အလွန်အံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မည်။ Contessa Valentina Allegra de Fontaine (သို့) Asgard မှ or ည့်သည်တစ် ဦး နှင့်အတူကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်းသမီးကိုလည်းငါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူမ SHIELD ကိုအေးဂျင့် #3အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမထားသကဲ့သို့ငါကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမတရားမှုကဲ့သို့ကန် - မြည်းအဖြစ်မင်းသမီးရရှိပါသည်သောအခါ, တစ်ခုခုရဲ့ပြanနာတစ်ခုဖြစ်မသွားငါ့ကိုပြောပြတယ်။
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 8 အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းတွဲ
မင်းသမီးမင်းသမီးရဲ့သွန်းလောင်းမှုဟာမင်းကိုစကြည့်ဖို့နောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါ S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ ။ စီးရီးသည်အလွန်မညီမညာဖြစ်နေသော၊ အတန်ငယ်အားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအစဖြစ်ခြင်း၏အရေးပါသောအဖြစ်အပျက်များမှထွက်ခွာခဲ့သော်လည်း Captain America - ဆောင်းရာသီစစ်သား ပြပွဲရဲ့စာရေးဆရာများသူတို့၏ခြေထောက်ပေါ်ထင်နှင့်ရှင်းရှင်းအသွင်ပြောင်းဖို့အတင်းအကျပ် S.H.I.E.L.D. ၏ကိုယ်စားလှယ်များ ။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, ထိုအပြောင်းအလဲပိုကောင်းဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်, နှင့်စီးရီးသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များများအတွက်ကြီးစွာသောနာရီဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစက်တင်ဘာလ 23 ရက်နေ့တွင် ABC ရုပ်သံသို့ပြန်လာကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်ပါတယ် - အထူးသဖြင့်ယခုအခါဘုတ်အဖွဲ့ Lawless နှင့်အတူ။
ရင်းမြစ် - IGN
vampire အကယ်ဒမီ2ရှိလိမ့်မည်
နောက်ဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သန်း 12 ရာသီဥတုအခြေအနေ PS4 လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ
ပုရွက်ဆိတ်သူနှင့်နကျယ်ကောင် Netflix မှလာပေတဲ့အခါမှာ
aquaman ဘယ်တော့ blu ray ပေါ်ပေါ်လာတာလဲ